सरकारले इन्टरनेटको सेवा नाप्ने उच्चस्तरीय प्रविधियुक्त मेसिन नेपाल ल्याउँदै
आईफोनमा समस्या: प्रयोगकर्तालाई थाहै नदिई जासुसी गर्न मिल्ने खराबी देखिएको एपलले गर्‍यो स्वीकार
यात्रु बोक्ने मोटरसाइकल कारवाहीमा
फेब्रुअरीमा सामसुङको ग्यालेक्सी एस १०
ड्रोन क्यामेरा देख्दा भागाभाग….
फेसबुक मेसेन्जरमा ‘डार्क मोड’ फिचर
स्विजरल्याण्डले बनायो स्मार्टफोनको लत छुटाइदिने मोबाइल फोन
अन्तरीक्षमा यात्रा गराउन उड्यो अन्तरीक्ष यान
स्विजरल्याण्डले बनायो स्मार्टफोनको लत छुटाइदिने मोबाइल फोनNeelam
ठूलो स्क्रिनयुक्त स्मार्टफोनको ट्रेण्ड सुरु भएसँगै फिचर फोनहरु बजारबाट हराए । यद्यपि, स्मार्टफोनमा अत्याधुनिक फिचर तथा सुविधाहरु उपलब्ध छन्, तथापि अहिले पनि फिचर फोन मन पराउने मानिसहरुको संख्या कम छैन । यदि फिचर फोनको हार्डवेयरमा स्मार्टफोनका केही फिचरहरु थपिए भने सायद त्यो सबैभन्दा उत्कृष्ट बन्थ्यो होला ।
अन्तरीक्षमा यात्रा गराउन उड्यो अन्तरीक्ष यानAyush
अन्तरीक्षमा यात्रा गर्न चाहने मानिसहरुका लागि व्यवसायिक उडान गराउने योजना बनाइरहेको स्पेस एक्स कम्पनीले अमेरिकाको फ्लोरिडास्थित केनेडी स्पेस सेन्टरबाट एक अन्तरीक्षयानको सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको छ । मानिसलाई अन्तरीक्षको यात्रा गराउनका लागि तयार पारिएको रकेटलाई परीक्षणको रुपमा अन्तरीक्षमा पठाइएको हो ।
टिकटकमाथि ५७ करोड जरिवानाSandesh
छोटो भिडियो शेयरिङ एप टिकटकमाथि अमेरिकामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै जरिवाना लागेको छ । बालबालिका सम्बद्ध डाटाको गोपनियता सम्बन्धी मुद्दामा टिकटकले ५७ लाख डलर जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।
अनलाइनमा गीत सुन्दा वातावरणलाई नोक्सानी !Neelam
आजकल मानिसहरु सिधै इन्टरनेटमार्फत गीत संगीत सुन्न चाहन्छन् । यु ट्युब लगायतका भिडियो स्ट्रिमिङ्ग साइटहरुले इन्टरनेटमा गीत सुन्ने तथा भिडियो हेर्नेका लागि निकै सहज बनाइदिएका छन् । तर, केही वर्षअघि सम्म यस्तो सजिलो थिएन । क्यासेट, सिडी तथा अन्य माध्यममा रेकर्ड गरिएका गीतहरु सुन्नुपथ्र्यो, हेर्नुपथ्र्यो ।
इरानी विदेशमन्त्रीको राजीनामा: किन गरे इन्स्टाग्राममार्फत् घोषणाRoshan
इरानका तर्फबाट सन् २०१५ को परमाणु सम्झौता गराउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका विदेशमन्त्री मोहम्मद जवाद जरिफले 'अनपेक्षित' रूपमा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा उनले राजीनामाको सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए। तर उनले राजीनामा दिनु कारण भने खुलाएका छैनन्।
टि्वटरका सिइओले भारतीय संसदलाई टेरेनन्, उपाध्यक्षलाई पठाउनेAnkit
माइक्रो ब्लगिङ साइट टि्वटरका एकजना वरिष्ठ अधिकारी सोमबार भारतीय संसदको एक समितिमा उपस्थित हुने भएका छन् । टि्वटरको सार्वजनिक नीती सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय उपाध्यक्ष कोलिन क्राबेल भारतीय संसदको सूचना प्रविधि समितिमा उपस्थित हुने भएका हुन् । टि्वटरका प्रवक्ताका अनुसार भारतीय संसदको आग्रह अनुसार टि्वटरका अधिकारी संसदीय समितिमा जान लागेका हुन् ।
मानवतस्करीमा दलालको हतियार ‘फेसबुक, भाइबर, इमो र ह्वाट्सयाप’Sandesh
गएको माघ तेस्रो साता म्यान्मारको बाटो हुँदै विभिन्न अरब मुलुकमा पठाइन लागेको अवस्थामा पूर्वोत्तर भारतको मणिपुर राज्यका विभिन्न स्थानबाट ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूको उद्धार गरियो। नेपाल र भारतमा अवैध मानव ओसारपसारविरुद्ध काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको पहलमा भारतीय प्रहरीले उनीहरूको उद्धार गरेको थियो।
सामसुङले बेच्यो २ अर्ब ग्यालेक्सी स्मार्टफोनPrajwal
दक्षिण कोरियाली कम्पनी सामसुङले सन् २०१० मा ग्यालेक्सी सिरिजका स्मार्टफोनको सुरुवात गरेको थियो । यसबीचमा ग्यालेक्सी सिरिजको १० वर्ष पूरा हुनुअघि नै कम्पनीले सफलताको एउटा ठूलो कोशेढुंगा पार गरिसकेको छ । ग्यालेक्सी एस १० सिरिजको लञ्चिङ समारोहमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी डि जे कोहले यसको जानकारी दिएका छन् ।
युट्युबको नकारात्मक प्रभाव, पृथ्वी थेप्चो बन्दै !Prajwal
इन्टरनेट अहिले सूचनाको सबैभन्दा शक्तिशाली तथा वृहत माध्यम बनिसकेको छ, यसमा कुनै शंका छैन । तर यहीँ इन्टरनेटमा अफवाह तथा गलत जानकारीहरु पनि तिव्र रुपमा फैलिरहेका छन् । यसको ताजा उदाहरण युट्युबको मामिलामा देखिएको छ । पृथ्वी गोलाकार छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । तर यु ट्युबका कारण पृथ्वी गोलाकार होइन समतल अर्थात् थेप्चो भएको ठान्ने मानिसहरुको संख्या बढिरहेको छ ।
नेपालले उठाउन सक्ला फेसबुक-ट्विटरबाट कर?Annapurna
सरकारले संसदमा पेश गरेको 'सूचना प्रविधको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'मा राखिएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान सुरुमै विवादमा तानियो। कतिपयले फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा खाता खोल्ने सामान्य प्रयोगकर्ताहरूले समेत सरकारको अनुमति लिनुपर्ने रूपमा त्यसलाई अर्थ्याए।
उपत्यकाका १५ कलेजमा ‘कोड फर चेन्ज’ हुँदै, प्रोग्रामिङमा लाग्न प्रेरित गरिनेAnusha
विज्ञान र प्रविधिका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी यस वर्ष पनि ‘कोड फर चेन्ज’ कार्यक्रम हुने भएको छ । प्रोग्रामिङको क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले ‘युथ इन सोसियल चेन्ज’को आयोजनामा काठमाडाैंमा दोस्रो पटक यो कार्यक्रम हुन लागेको हो ।
यूटीएलबाट खोसियो अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्माAnusha
सरकारले गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर पाँचका जिल्लाको मध्यपहाडी लोकमार्ग र विभिन्न जिल्लाहरुमा अप्टिकल फाइबर बिच्छाउन गरिएको सम्झौता रद्द गरेको छ । योसँगै युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) गोरखाको आरुघाटदेखि रुकुमको मुसिकोटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामबाट बाहिरएको छ ।
अमेरिका र हुवावेबीचको लडाइँले फाइभजीमा धक्काAyush
चिनियाँ कम्पनी हुवावेविरुद्ध अमेरिकाले पछिल्लो समयमा चालेको कडा कदमका कारण नयाँ पुस्ताको मोबाइल नेटवर्क फाइभजीको विश्वव्यापी योजनामा धक्का लागेको छ । फाइभजीको तयारी गरिरहेका मोबाइल अपरेटरहरु अमेरिका र हुवावेबीचको तनावका कारण समस्यामा परेको बताइएको छ । तर हुवावेले भने अमेरिकाको यस्तो आरोप सख्त रुपमा खारेज गरिरहेकोे छ ।
ह्वावेई विवाद: किन यो विशाल चिनियाँ कम्पनी समस्यामा परेको छSandesh
अहिले धेरै मानिसहरू ह्वावेईबारे चर्चा गरिरहेका छन्। सो कम्पनीले उच्च गुणस्तरका फोन बनाएको भएर र तिनको राम्रो समीक्षाका कारण मात्र त्यस्तो भएको भने होइन। यो चिनियाँ कम्पनी थुप्रै ठाउँमा विवादमा परेको छ। यो कम्पनीले आफ्नो प्रविधि प्रयोग गरेर मानिसहरूको गुप्तचरी गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
ज्याक डोर्सी: किन खोज्दैछ ट्विटरका प्रमुख कार्यकारीलाई भारतNeelam
ज्याक डोर्सी विवादमा परिरहन्छन्। पछिल्लोपटक भारत भ्रमणमा रहँदाको नोभेम्बर महिनामा ट्विटरका यी प्रमुख कार्यकारीले सामान्य ठानेर खिचेको एउटा तस्बिरले भारतका हिन्दू राष्ट्रवादीहरूलाई भने क्रुद्ध पार्‍यो। उक्त तस्बिरमा देखाइएको एउटा प्लेकार्डमा उच्च जातका हिन्दूहरूबाट हुने विभेदलाई सङ्केत गर्दै 'टुक्रिएको ब्राह्मणवादी पितृसत्ता' लेखिएको थियो।
देशभर एनालग टीभी सेवा बन्द गर्न सरकारको निर्देशन, अटेर गरे कारवाहीNeelam
सरकारले देशभर पूर्ण रुपमा एनालग टेलिभिजन सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । गत बैशाख १५ भित्रै एनालग टेलिभिजन सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको सरकारले अटेर गरेको भेटिए उपकरण जफत गरी कानुनी कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । निर्देशन अटेर गरी ‘कसैले एनालगर प्रणालीका टेलिभिजन प्रसारण/विवरण गरेको भेटिएमा उपकरणहरु जफत गरी कानुन बमोजिम कारवाही गरिने’ चेतावनी दिइएको छ ।
फोल्डेबल आइफोनको तयारीमा एप्पल, यस्तो छ डिजाइनAyush
स्मार्टफोन उद्योगका लागि यो वर्ष सन् २०१९ विशेष हुनेवाला छ । एकतार्फ केही कम्पनीहरुले आफ्नो फाइभ जी नेटवर्क कनेक्टिभिटीयुक्त स्मार्टफोन पेस गर्ने तयारी गरेका छन् त अर्कोतर्फ कतिपय कम्पनीहरुले स्क्रिन फोल्ड गर्न मिल्ने स्मार्टफोन लञ्च गर्नेछन् । यसअघि सामसुङ, साओमी, हुवावे, एलजी, लेनोभो तथा मोटोरोला कम्पनीले फोल्डेबल स्मार्टफोन ल्याउने घोषणा गरिसकेका छन् ।
कति बेला काम लाग्छ प्रहरीको हटलाइन एसएमएस
अनलाइनमा गीत सुन्दा वातावरणलाई नोक्सानी !
अमेजन मालिक बने दुनियाकै दानी दम्पत्ति, बिल गेट्स र जुकरबर्ग कन्जुस बन्दै !